अमेरिकामा नेपाली नेपाली बिच मुद्दा दायर, नेपाली सङ्घ संस्थामा लाग्नु अघि एक पटक सोच्ने कि ? - pnpkhabar.com
You are at:Home»प्रवास»अमेरिकामा नेपाली नेपाली बिच मुद्दा दायर, नेपाली सङ्घ संस्थामा लाग्नु अघि एक पटक सोच्ने कि ?
अमेरिकामा नेपाली नेपाली बिच मुद्दा दायर, नेपाली सङ्घ संस्थामा लाग्नु अघि एक पटक सोच्ने कि ?
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०३:०८ प्रवास
अमेरिकामा अब कुनै पनि राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा रहेका नेपालीहरूद्वारा स्थापित मुनाफा रहित सामाजिक संस्था विवाद, झगडा तथा अदालतमा पुग्ने कुरा नयाँ र नौलो नरहने भएको छ । यसो भन्दैमा सबै सङ्घ/संस्था जुनै जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने चाही हैनन् । विश्वकै सबै भन्दा ठुलो प्रजातन्त्रको देशमा न्याय माग्न पाइन्छ ।